Maitiro ekuchengetedza Apple Music nziyo dzekuterera isingaite | IPhone nhau
Maitiro ekuchengetedza Apple Music nziyo zvekuteerera kunze kwenyika
IPad nhau | | Apple Music, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Nezuro Apple yakatangisa zviri pamutemo iOS 8.4 uye nekudaro basa rayo idzva Apple Music: Multiplatform yekumhanyisa mimhanzi sevhisi iyo yatinogona kuteerera kumamiriyoni enziyo mahara kwemwedzi mitatu (ehe, ipapo ... kubhadhara). Mukati meApple Music pane chikamu uko maartist anogona kutaurirana nevateveri vavo, uye rimwe remabasa anonakidza pane ino sevhisi Inorova 1 redhiyo yenyika inoshanda nguva dzose, mazuva manomwe pavhiki. Mune ino posvo ini ndiri kuzokudzidzisa iwe ponesa Apple Music nziyo kuti iwe ugogona kuzviteerera kunze kwenyika. Mushure mekusvetuka iyo dzidziso.
Teerera kune ako Apple Music nziyo is offline (offline)
Kutenda kune iyo isingaenzaniswi modhi isu tinogona kuteerera kune edu aunofarira nziyo pasina kusangana kune chero network yemhando ipi zvayo. Mumhanzi watinoda kunzwa unozotorwa pasi kuchinhu kuti unzwike pasina dambudziko pasina kubatana. Ichi chinhu chakanakira avo vanofamba zvakawanda uye semimhanzi, asi vasina mari hombe yedhata kana kungoda kutambisa data ravo.
Kuti uwane tora nziyo, maalbum kana playlist kubva kuApple Music yekuzotamba zvekare isingaenderane nekutevera matanho anotevera:
Vhura iyo Mumhanzi app uye pinda zvikamu «Zvako» kana «Nyowani»
Unogona kusevha maalbum, nziyo kana zvinyorwa zvekutamba zvaunoda kuteerera kunze kwenyika Padivi rerudyi rwiyo roga roga kana dambarefu pane chiratidzo chine madenderedzwa matatu. Dzvanya pairi uye runyorwa rwezvisarudzo zvicharatidzirwa.Kana iwe uchida kusevha iyo mimhanzi kuti ugone kuuteerera isingaenderane, unofanirwa kudzvanya pa «Inowanikwa online".
Kana tangoita izvi, nziyo dzinozotorwa pasi kumashure kubva paInternet kuti uvateerere kunze kwenyika. Zvese zvaunotora pasi zvinochengetwa mu "Mumhanzi Wako", uko kwatinozofanirwa kuwana kuti tiitambe tisiri pamhepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Maitiro ekuchengetedza Apple Music nziyo zvekuteerera kunze kwenyika
Raul Cabrera akadaro
Jorge Cabrera Sierra
Pindura Raúl Cabrera
Mubvunzo wangu ndou…. Kana isu tasarudza kusamutsidzira Music service, chii chinoitika kuimba dzatinotora. Varipirwa kwatiri here? Kana kunyangarika?
Waizorega kugona kuvanzwa.
Carlos Ruben akadaro
Mubvunzo wakanaka Roldwin. Mumwe mubvunzo ungangove wekuti kana ndichigona kuteedzera idzi nziyo kuPc yangu uye kana ndikapedza mazuva akati wandei ndisina internet, mimhanzi yangu yakachengetedzwa isipo?
Pindura Carlos Rubén
Nziyo dzinowedzerwa kuMy Music dzinotora nzvimbo yekuchengetera pane mudziyo wangu here?
Chete kana iwe ukadzitsvaga kuti uvateerere kunze kwenyika.
Ndeipi iri sarudzo "Inowanikwa isingaite"?
Ikozvino zvachinja neiyo iOS inogadziridza. Kuti utore mimhanzi unofanirwa kudzvanya pagore rinoonekwa mune akasiyana mamamusic mamenyu.
Mubvunzo wangu ndewekuti kana ndikaadzora mumhepo isingaite, vangazochengetwa mumumhanzi wangu kana mumimhanzi yeApple? Uye mumwe mubvunzo, mushure memwedzi mitatu iyo mimhanzi yakadzingwa yakabviswa kubva kuraibhurari yangu?
Nziyo dzaunotora kuti uvateerere kunze kwenyika dzotorwa mumudziyo wako, mukati meMusic application. Mushure memwedzi mitatu iyi hatizive kana ichadzimwa, asi chiri chokwadi ndechekuti hauchakwanise kuenderera uchiteerera.
Ndinozvipa kuti ndichengete rwiyo kubva kuApple Music mune runyorwa rwakagadzirwa neni uye, pandinovhura runyorwa ruri mubvunzo, nziyo hadzibude ... Kana ndichinge ndachengeta, ndinowana chikwekwe «ok» asi maranjisi kubva kuChina ... Izvo, muSpotify, hazviitike ...
Ini handina unhinged ...
Pane chero munhu anoziva kana zvichitora zvimwe ndangariro kuchengetedza mimhanzi isingaenderane neApple mumhanzi kana ine spotify?
Ndisati ndatenda zvikuru
Zvakanaka, vanofanirwa kuenda zvishoma kana zvishoma vachienda pamwe nekuti iyo bitrate yakawedzera kana zvishoma zvakafanana, asi ini handigone kuzvisimbisa.
Mumwe mubvunzo, nziyo dzandaive nadzo panyama paApple pamberi peApple Music, ikozvino neApple Music vakave vari muICloud ndinofunga, mushure mekumisikidza kuenda kuIOS9, ndakaona kuti hazvainditendera kuti ndivateerere dai zvisiri kurodha pasi kare ... zvinogona kudaro? ikozvino ndavadhawunirodha (ndisati ndave navo mukati me iPhone yangu) kuti ndikwanise kuvateerera pasiri pamhepo, asi ini ndanga ndatova navo kare sezvandakambotaura. Saka havazoiti? Kunyangwe kana kunyorera kuApple Music kwapera, handiti? nekuti ndanga ndatova navo. Kwaziso nekutenda…
Kana iwe waive uinavo zvisati zvaitika, iwe uchafanirwa chete kuzvifananidza ne iTunes pese paunenge uchida ivo.
Ah! zvakanaka, ndatenda zvikuru uye kwaziso
gerardo navarro akadaro
Kune here muganho kune iyo nhamba yenziyo iwe yaunogona kuteerera kunze kweinternet modhi? Ini ndinobvunza nekuti ini ndine spotify premium asi zvinongonditendera kuti nditeerere 3,000 (zviuru zvitatu) nziyo mune ino modhi, uye ndicho chinhu chandisingafarire nezve spotify, uye ndingade kuziva kana paine muganho mumumhanzi weapple uye kana zvirizvo, ingani nziyo idzo muganho? Kutenda mberi
Pindura gerardo navarro
Ini handione sarudzo "Inowanikwa isingawanikwe", iripi?
Ini ndaive nenziyo dzinoverengeka asi ndaifanira kubuda kunze kweiyo ID apple nekuti zvaisazondibvumira kurodha kunyorera etc. nhasi ndakwanisa kupinda mukati mushure mekudzima iphone, asi mimhanzi yandaive nayo mukushambadzira haipo! Ndinoidzosa sei, handirangariri zvese zvandaive nazvo! SOS
Star Walk 2, yakanakisa kunyorera nezve nyeredzi sekushandisa kwevhiki
Mimir, hwindo hwakawanda hwakawanda huchauya munguva pfupi kune yako iPhone ne iOS 8